အိုးနိုးနိုးနိုး!!!! ကော့ညွန့်စင်းအောင် လန်းလွန်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံပုံများ – Shwe Yoe
အိုးနိုးနိုးနိုး!!!! ကော့ညွန့်စင်းအောင် လန်းလွန်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံပုံများ
ပိုစ့်ဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တတ်တဲ့ မော်ဒယ်၊မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ သူမရဲ့ ခပ်ဆန်းဆန်း ဓါတ်ပုံလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားမှာ ကျော်ကြားလာသူလေးတစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်ကြီးရေ အသားအရည် ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်ပြီး မြင်သူငေးရတဲ့အလှ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်မော်ဒယ်လ် နွယ်နွယ်ထွန်းကတော့ ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူလေးပါနော်။ နွယ်နွယ်ထွန်းက ချစ်စရာကောင်းပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးအပြင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်း တဲ့ တောင်းတင်းလှပပြီး အချိုးအစားပြေပြစ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေသာမကပဲ မိန်းကလေး အချင်းချင်းကပါ အားကျနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်…….။
သူမကတော့ ဒီကနေ့မှာ သူမရဲ့ ကျစ်လစ်တဲ့ ဘော်ဒီအလှနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အကြည့်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ပရိသတ်တွေအတွက် နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အလှဓါတ်ပုံလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေတိုင်းက ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတာကြောင့် ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုပြီး ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်……..။
ပိုဈ့ဆနျးဆနျးလေးတှနေဲ့ ဓါတျပုံရိုကျတတျတဲ့ မျောဒယျ၊မငျးသမီးလေးတဈယောကျဖွဈတဲ့ နှယျနှယျထှနျးကတော့ သူမရဲ့ ခပျဆနျးဆနျး ဓါတျပုံလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ ကြျောကွားလာသူလေးတဈယောကျပါ။ ပရိသတျကွီးရေ အသားအရညျ ဖွူဖှေးဝငျးမှတျပွီး မွငျသူငေးရတဲ့အလှ ကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဖကျရှငျမျောဒယျလျ နှယျနှယျထှနျးကတော့ ပုရိသပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံခွငျးကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ သူလေးပါနျော။ နှယျနှယျထှနျးက ခဈြစရာကောငျးပွီး အပွဈကငျးစငျတဲ့ မကျြနှာလေးအပွငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိလှနျး တဲ့ တောငျးတငျးလှပပွီး အခြိုးအစားပွပွေဈတဲ့ ကိုယျခန်ဓာကို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ ယောကျြားလေးပရိသတျတှသောမကပဲ မိနျးကလေး အခငျြးခငျြးကပါ အားကနြရေတာလညျးဖွဈပါတယျ…….။
အခုလညျး ရကေူးဝတျစုံနဲ့ လနျးလှနျးတဲ့ အရမျးစားပိုဈ့တှပေေးပွီး ခဈြပရိတျသတျကွီးအတှကျ အမိုကျစားပုံတှေ တငျပေးလိုကျပါတယျ
သူမကတော့ ဒီကနမှေ့ာ သူမရဲ့ ကဈြလဈတဲ့ ဘျောဒီအလှနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အကွညျ့တှကေို ဖမျးစားလိုကျပွနျပါပွီ။ ပရိသတျတှအေတှကျ နှယျနှယျထှနျးရဲ့ အလှဓါတျပုံလေးတှကေို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ပုံလေးတှတေိုငျးက ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိနဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတောကွောငျ့ ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုပွီး ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော……..။
ဂျမ်းတောလေးကို သရက်ကင်မရောင်းခိုင်းတော့ ဘဲ အနုပညာလောကထဲ ကို လက်တွဲခေါ်သွားမယ်လို့ပြောလာတဲ့ စည်သူပလပ်ကျွတ်
အလန်းစား ဖက်ရှင် နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ တွန့်ပြလိုက်တဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ ဗီဒီယို